Félix de Azúa: uri, edemede na akuko di elu | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Novela, Abụọ
Félix de Azúa bụ onye ode akwụkwọ Spen a na-ewere dị ka otu n’ime ndị na-akwado akwụkwọ ọgụgụ nke narị afọ nke XNUMX. Ọ pụtawo dị ka onye na-ede uri, onye edemede, na onye edemede; facets nke o gosiputara na ochichiri na obu nihilistic. N'oge ọrụ ya, o jisiri ike nweta ọtụtụ onyinye dị mkpa, dị ka onyinye Herralde de Novela na onyinye Caballero Bonald International Essay.
Ọzọkwa anọgidewo na-arụ ọrụ ọkachamara ya na nso nkuzi na akwụkwọ akụkọ. N’afọ 2011, o bipụtara edemede ya “Against Jeremías” n’akwụkwọ akụkọ El País, nke o ji nweta César González-Ruano nke oru nta akuko. N'ihi na 2015 ọ banyere họrọ otu nke ndị otu Royal Spanish Academy, ebe H.
1 Nkenke biography nke edemede
1.1 Ndụ ọrụ
2 Ọrụ edemede nke Félix de Azúa
2.1.1 Ọrụ uri nke onye edemede
2.2.1 Ọrụ akụkọ
3 Booksfọdụ akwụkwọ Félix de Azúa
3.1 Akụkọ banyere onye nzuzu dị ka onwe ya gwara ya ma ọ bụ ọdịnaya nke obi ụtọ (1986)
3.2 Diary nke nwoke ihere (1987)
3.4 Ọbara Ikpeazụ (Poetry 1968-2007) (2007)
3.5 Akwụkwọ Autobiography (2013)
Nkenke biography nke edemede
Onye edemede bụ Félix de Azúa mụrụ na Sọnde Eprel 30, 1944 na obodo Spain dị na Barcelona. Mgbe m gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, banyere na Mahadum nke Barcelona, ebe ọ gụsịrị akwụkwọ dị ka onye gụsịrị akwụkwọ na Philosophy na Akwụkwọ edemede. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, n'otu ụlọ akwụkwọ ọmụmụ ahụ, ọ nwetara akara mmụta mahadum kachasị elu: Dọkịta nke Nkà Ihe Ọmụma.
Na mbido afọ ndị 80, ọ rụrụ ọrụ dịka onye nkuzi na oche nke Philosophy na sayensị na Mahadum nke Basque Country. Ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, kụziri klasị na Aesthetics na Theory of Arts na Mahadum Polytechnic nke Catalonia. Mgbe e mesịrị, ọ na-eduzi ụlọ ọrụ Cervantes na Paris (1993-1995). Ọ na-arụkọ ọrụ ugbu a na ụfọdụ mgbasa ozi edere ederede Spanish, dịka Akwụkwọ akụkọ nke Catalonia y Obodo.
Ọrụ edemede nke Félix de Azúa
Ọ malitere na akwụkwọ edemede dịka onye abụ site na mbipụta nke: Otter ebuka (1968), nke mbụ n’ime mmadụ itoolu ya akwụkwọ uri. Kemgbe ahụ, a na-ewere ya dịka akụkụ nke ọgbọ "ọhụụ"; ọ bụghị n'efu, na 1970 ọ gụnyere na akụkọ ọdịnala Mmadụ itoolu na-ede akwụkwọ na Spanish. Ihe edere na onye edemede nke Catalan site na mmechi ya na nkpuru oyi ya, ya na isiokwu banyere ihe efu na ihe efu.
Ọrụ uri nke onye edemede
Otter ebuka (1968)
Ihe mkpuchi na ihu nke Agamemnon (1966-1969) (1970)
Edgar na Stéphane (1971)
Gaa na egwu asaa (1977)
Anthology Poetry (N'afọ 1968-1978) (1979)
Anthology Poetry (N'afọ 1968-1989) (1989)
Ọgwụ Ọgwụ Ikpeazụ (Poetry 1968-2007) (2007)
Na 1972, onye edemede dere akụkọ mbụ ya: Ihe ọmụmụ Jena; site n'ebe ahu o biputere ngụkọta nke ọrụ 9 nke ụdị a. N'etiti ọrụ ya dị ka onye na-ede akwụkwọ akụkọ pụtara ìhè Diary nke nwoke ihere (1987), nke o ji nweta onyinye nke Herralde de Novela n'otu afọ ahụ. Site na mkpịsị akwụkwọ ya, ndị Spain ejidela ụdị nke satirism na ịkpa ọchị.
Ihe ọmụmụ Jena (1972)
A kwụsịtụrụ ihe (1978)
Ikpeazụ ihe (1981)
ịdị nwayọọ (1984)
Akụkọ banyere onye iberibe dị ka agwa n'onwe ya ma ọ bụ ọdịnaya nke obi ụtọ (1986)
Diary nke nwoke ihere (1987)
Flag mgbanwe (1991)
Ọtụtụ ajụjụ (1994)
Oge ikpebi (2000)
A na-ewere onye edemede ahụ dị ka otu n'ime edemede ndị kacha ewu ewu na Spen; Kemgbe ọrụ ya, o mepụtala akwụkwọ karịrị 25 na ụdị nkọwa a. Akụkụ nke mmata ya bịara na 2014 na Caballero Bonald International Essay Award, maka ọrụ ya: Akwụkwọ autobiography (2013). Ikpeazụ ya na usoro a bụ: Nke atọ (2020).
Booksfọdụ akwụkwọ Félix de Azúa
Ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ mere na Spain n’etiti narị afọ nke iri abụọ, obere oge mgbe agha obodo biri. Onye na-eme ihe nkiri na-eche echiche banyere ndụ ya niile, site na nwata ruo n'oge. Ebumnuche ya bụ ịtụle obi ụtọ na nke ọ bụla n'ime usoro ndị a, na mgbakwunye na ịtụle ụkpụrụ ndị ọzọ, dị ka: okpukpe, ịhụnanya na mmekọrịta mmekọahụ; ndọrọ ndọrọ ọchịchị, n'etiti ndị ọzọ.
Mgbe ị na-enyocha ụfọdụ foto site na mgbe ọ bụ nwata, ọ ga-ahụ otu ebe ọ na-amụmụ ọnụ ọchị, nke onye ọ bụla nwere ike ịkọwa dị ka ọ joyụ. Ma, nke ahụ bụ mgbe nke a malitere inwe obi abụọ banyere ntụgharị akwụkwọ a, dị iche tupu ọchụchọ maka obi ụtọ mmadụ. Dị ka a ga - asị na ọ bụ nyocha ụlọ nyocha, ọ ga - achịkwa ọnọdụ dị iche iche n'otu n'otu iji kwado amụma ya.
Akụkọ banyere onye ara ...
Ọ bụ ihe ọchị ojii na Barcelona, ​​nke na-akọwa akụkọ banyere nwoke karịrị afọ 40, onye na-akọ akụkọ ndụ ya na onye mbụ. Nye ya, mmebi iwu bụ naanị ihe na-eme ka ndụ mmadụ pụta, nkwupụta ọ na-ewe na ncheta dị iche iche na nkata niile. E kewara ndị a iberibe atọ: "Nwoke Banal", "Ihe Ize Ndụ nke Banality" na "Gbuo Dragọn".
Na ụzọ agba abụọ mbụ a na-akọ akụkọ ezinụlọ onye ahụ na ahụmịhe ya na ụfọdụ agbata obi Barcelona. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, ọ ga-ezute onye na-eme ihe ike ọ ga - emecha rụọ ọrụ mgbe ọ tụkwasịrị ya obi. Na mpempe akwụkwọ ikpeazụ, afọ anọ ahụ ga-emikpu onwe ya na gburugburu ebe obibi nke onwe ya, nke onye isi ya ga-anwa ịzọpụta ya.
Diary nke nwoke ...
Ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ guzobere na Basque Country na 30s, nke a na-akọ n'ụdị uche. Dị ka onye bụ isi ọ na-eweta bourgeois, bụ onye, ​​na-ekwenye na ya bụ onye mba, na-atụgharị uche n'ịchọ ụgbọ elu ịwakpo onye iro ahụ naanị. Onye isi okwu ga-arụrịta ụka n'etiti ikwesị ntụkwasị obi na ala nna ya ma ọ bụ ịghọ dike "aghụghọ". iji merie onye mmegide.
Ka ị na-eche mbibi gị ihu, ị ga-echekwa ọtụtụ ndị aghụghọ mgbapụ. Onye Navarrese hụrụ n'anya, onye na-eme ihe ike, onye ụkọchukwu psychopathic na ọkàiwu Falangist ga-abụ akụkụ nke akụkọ a. Na mbido, nkata ahụ jiri nwayọ nwayọ ma na-agbagwoju anya, mana ọ na - aga n’ihu n’iru iji gosipụta ihe omimi ebe ngwugwu niile dabara n’ụzọ zuru oke.
Onye dere ya kwupụtara n’ajụjụ ọnụ ọ gbara n’akwụkwọ akụkọ ahụ Mba ahụ, onye mere akwukwo akwukwo site na ijiko akuko abuo. Otu, banyere nna nke enyi nwanyị mbụ ya, onye Republican na onye nwe obodo hụrụ n'anya nke itinye uche ya na itinye ego na ịwakpo Franco. Nke ọzọ, ihe nkiri nke onye nnọchi anya mba hetali ọ zutere afọ 15 mgbe nke ahụ gasịrị, onye nọ na mkparịta ụka ahụ iji nyefee Basque Country na Italytali.
Flag mgbanwe ....
Ọbara ikpeazụ (Uri (1968-2007) (2007)
Nchịkọta uri ndị a gosipụtara na 2007 gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ nke ọrụ uri nke onye edemede, nke gụnyere akwụkwọ ndị ọzọ a na-agbasabeghị. N'ime akwụkwọ a ị ga - ahụ mgbanwe na ụdị pụrụ iche nke onye edemede, nke juru ndị niile na-agụ ya anya na afọ 70. Akụkọ ọdịnala ahụ nwere abụ uri, nke a na-enwetụbeghị ụdị ya ruo mgbe ahụ.
Ọbara Ikpeazụ (Poetet ...
Akwụkwọ autobiography (2013)
Ọ bụ edemede nke onye edemede na-eme njem nleta site na ahụmịhe ya n'akụkụ dị iche iche edemede. N'etiti ahịrị ndị ọ kọwara mbido ya dịka onye na-ede uri, usoro ya site na akwụkwọ akụkọ na ihe isi ike nke edemede. Ọ na-akọwakwa ọgịga ya na akwụkwọ akụkọ, ụdị nke ọ na-ewere dị ka nke kachasị nwee ọfụma n'ihe gbasara eziokwu anyị bi na ya ugbu a.
Na post a, onye ode akwukwo na-acho inye echiche ya banyere otu esi ede akwukwo di iche-iche, karịsịa na narị afọ gara aga. Azúa gosipụtara ọtụtụ ndị ezigbo mmadụ bụ ndị batara n'ọrụ ndị a na ọrụ ya, na-etinyeghị ndụ nke aka ya.
Akwụkwọ autobiography ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Akụkọ ndụ » Felix de Azúa